China Lab-eji Fluidized-bed Jet Mill N'ihi 1-10kg ikike factory na-emepụta | Qiangdi
Jet mill igwe ihe igwe na-ese
Ihe ndị a ga - egweri site na ịmalite inwe mmetụta ọsọ ọsọ na ijikọ ugboro ugboro n'etiti ikuku na - agba ọsọ ọsọ. A na-ekewapụta ihe ndị e mepụtara site na grading grading na ihe ndị dị mkpa na-ekewapụrụ mgbe Cyclone Separator na Mkpokọta chịkọtara, A na-eziga ihe ndị ahụ na-agagharị agagharị na ụlọ igwe ahụ iji megharia ya ruo mgbe ha ruru nha achọrọ.
1.Mainly maka Low ikike ina, 0. 5-10kg / h, dabara na-eji na ụlọ nyocha.
The unit e mere dị ka kọmpat esịtidem Ọdịdị ịrụ mechie circuit milling.
3.No okpomọkụ ịrị elu, ala unit mkpọtụ, ọ adịghị ọcha, ala n'efu n'oge-egwe ọka.
4.Small akụkụ, kọmpat udi, dabara na-eji na ụlọ nyocha. Usoro a na - ejide njikwa ihuenyo mmetụ ọgụgụ isi, ọrụ dị mfe na njikwa ziri ezi.
5.With ezigbo ikuku ikuku, hụ na gburugburu ebe obibi dị ọcha. Ọrụ dị mma na nlekọta, arụmọrụ akụrụngwa.
6. Wide grading akporo:a na-etipịa ihe na-akụda nke ihe ahụ nwere ike ịhazi site n'ịgbanwe ọsọ ntụgharị nke wiil na usoro ahụ. Ohaneze, ọ nwere ike iru d = 2 ～ 15μm
7. Ike oriri dị ala:Ọ nwere ike ịchekwa ike 30% ～ 40% ma e jiri ya tụnyere ndị ikuku pneumatic pulverizers.
8. Obere eyi: N'ihi na ihe na-akụri ihe na-ada site na nsonaazụ na nkukota nke ahụ, ihe ndị dị ọsọ ọsọ anaghị adịkarị na mgbidi. Ọ metụtara na ịzọpịa ihe n'okpuru Moh si n'ọtụtụ 9.
Efere eserese nke Fluidized-bed Jet Mill
Nkọwapụta igwe nkọwa
1. Structure dị mfe, na-asa oghere, mfe ọcha
2. Motor with cap iji zere ntụ ntụ
3. Ọdịdị kọmpat: ijide ala pere mpe
1. Nditịm kwekọrọ ISO9001-2000 quality management usoro;
2. Jighi oru site na nyocha nyocha, nyocha usoro na nyocha ikpeazụ;
3. Mepụta ọtụtụ ngalaba QC iji mepụta ụkpụrụ njikwa njikwa mma;
4. Zuru ezu àgwà akara atụ:
(1) Dezie faịlụ maka njikwa mma na nzaghachi mma;
(2) Nnyocha siri ike maka ihe ndị anyị na-egweri igwe, iji kwenye na ngwaahịa agaghị emebi ma zere
nchara-eri na agba ekpepụsị anya mgbe e mesịrị.
(3) Naanị ihe ndị ruru eru ka a ga-achịkọta na akụrụngwa akụrụngwa ga-enyocha kpamkpam tupu ire ere.
N'elu nkwenye ahịa, anyị ga-enye ọrụ ọrụ ndị a:
1. Kere maka mmepụta akara gị na nhazi akụrụngwa, enweghị ụgwọ;
2. Nye ntọala Eserese nke ndị ahịa na-enye iwu na-egweri igwe na ihe osise nke akụkụ ndị metụtara ya, wdg;
3. A ga-enye ihe ntinye aka nke akụrụngwa akụrụngwa;
4. Free oru aro na ukpụhọde nke ngwa okirikiri nhọrọ ukwuu na ngwa;
5. Nkwalite akụrụngwa (ndị ahịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ ọnụahịa);
1. Anyị ga-eziga anyị ẹkesikpede ka saịtị maka eduzi ihe echichi na Jizọs na-ezipụ.
2. N'oge nrụnye na inye ọrụ, anyị na-enye ọrụ ọzụzụ ndị ọrụ.
3. bọchị mmesi obi ike bụ otu afọ mgbe enyere ọrụ. Na mgbe nke ahụ gasị, anyị ga-anakọta ego ma ọ bụrụ na ị nweta mmezi maka ngwa gị.
4. Nlekọta maka ọdịda akụrụngwa kpatara njikwa na-ezighi ezi (a ga-anakọta ego kwesịrị ekwesị).
5. Anyị na-enye ihe ndị ahụ nwere ọnụahịa dị mma ma na-edozi mmezi.
6. Ọ bụrụ na achọrọ nrụzi akụrụngwa mgbe ụbọchị njiri mara mma gwụrụ, anyị ga-anakọta ụgwọ mmezi.
Nke gara aga: -Lọ nyocha Lab-eji igwe ihe eji egwu mmiri QDB-50 QDB-100 QDB-150
Osote: Battery Industry na ndị ọzọ Chemical Ihe Jiri Fluidized-bed Jet Mill